नेता बिष्णु पौडेल भन्नुहुन्छ : इमानदारी पूर्वक कर तिर्नुहोला । – yuwa Awaj
नेता बिष्णु पौडेल भन्नुहुन्छ : इमानदारी पूर्वक कर तिर्नुहोला ।
कार्तिक १७, २०७७ सोमबार 0
काठमाडौ : चार वर्ष पहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ‘गोरखा भू’कम्प’ का कारण जनजीवन अ’स्तव्यस्त थियो । प्रा’कृतिक वि’पत्तिका कारण स’मस्यामा परेको मुलुकलाई भारतले गरेको ना’काबन्दीले थप सम’स्यामा पारेको थियो ।
सबै स’मस्यालाई छिचोलेर अर्थ’तन्त्रलाई लयमा लैजानु भएका स’त्तारुढ नेपाल क’म्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले पुनः अर्थ मन्त्रालयको ने’तृत्व सम्हालेका छन् । को’भिड– १९ का कारण फेरि यतिखेर अ’र्थतन्त्र स’मस्यामा छ । उनिमाथि नागरिकको स्वा’स्थ्य सुर’क्षालाई प्रा’थमिकतामा राख्दै आर्थिक ग’तिविधिलाई चलायमान बनाउने प्र’मुख जि’म्मेवारी पनि रहेको छ ।
अ’र्थमन्त्री पौडेलसँग मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अ’वस्था, सरकारको कामकारवा’हीलगायतक विषयमा रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश
अ’र्थतन्त्रलाई थप गति दिन सबै सरोकारवालाहरूले के गर्न आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसंँग छलफल गरिरहेको छु । थप सुझावहरू दिन आ’ह्वान गर्दछु । उत्पादनका भौतिक सं’यन्त्रमा को’भिड– १९ स’ङ्क्रमणले खासै असर नगरेकाले हामीले अघि सारेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र स’ङ्क्रमण घट्दै गएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र भी आकारमा पुनरु\_त्थान हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
सरोकारवालाहरूसंँग छलफल र परामर्श गरेर थप कार्ययोजना तर्जुमा गर्नेछौँ । सरकार को’राना प्रभावि
Prevदाहाल क्याम्पमा सचिवालयका ६ जना, ओलीले अब अलग–अलग जाऔं भनेको दाहालको ब्रिफिङ…हेर्नुहोस् ।
Nextप्रचण्डको जवाफ : बिधि नमान्दा र अरूलाई बदमान गर्दा बहादुर भइन्छ भन्नेसँग संवादको के अर्थ !
के तपाई खुर्सानी खानुहुन्छ ? एक पल्ट अवस्य पढ्नुहोस ।
सुरुमा नौ लाख नेपालीलाई को’रोना खो’प दिइने…हेर्नुहोस् ।
ट्वाइलेटको पानी र खुट्टाले पिठो मुछेर बनाएको देखेपछि तोडियो हजारौ पुग्ने पानीपूरी पसल…हेर्नुहोस् ।